Igumbi lokulala eli-2 leHolide yeKhaya leHolide e-Southport
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguSophie
I-Cottage @ 20B Isitalato sasePortland yindawo entle kakhulu, enebhedi ezimbini zasedolophini kwicala lolwandle eliseSouthport. Ibekwe ngokugqibeleleyo, le dolophu yanamhlanje ilala i4 kwaye inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi.
Ngendawo esembindini ebalaseleyo umgama nje wemizuzu emi-2 ukusuka kumbindi wedolophu, iCottage ikwaxhamla kwindawo yokupaka ezitalatweni simahla kwiimoto ezi-2.
The Cottage @ 20B Portland Street
Igumbi lethu lokulala lokuqala lilala ezi-2 kwibhedi ekhululekileyo yobukhulu ukuze ukonwabele ukuphumla ebusuku. Eli gumbi linokwenziwa njengegumbi lokulala eliwele ngokwesicelo sakho. Nceda usazise ukuba ungathanda ukuba igumbi limiswe njengeebhedi ezimbini ngexesha lokubhukisha.
Kukwakho negumbi lokuhlala kuzo zonke izinto zakho, kunye ne-smart TV.
Igumbi lethu lokulala lesibini lilala ezi-2 kwibhedi ephindwe kabini. Igumbi likwabonelela ngegunjana lazo zonke izinto zakho, kunye ne-smart TV.
Igumbi lokuhlambela lethu lixhotyiswe ngeshawari enkulu yale mihla kunye nezixhobo ze-w/c.
Isicwangciso sethu esivulekileyo sendawo yokuhlala yangoku sinendawo yokuhlala etofotofo kunye netafile yokutyela, kunye ne-smart TV. Ikhitshi lethu linazo zonke izixhobo kunye nezixhobo ozidingayo ukuze urhole isidlo osithandayo.
Ngaphandle kukho igadi onokuthi uyisebenzise ukuba uyathanda, kunye nokupaka iimoto ezi-2 kwindlela yethu yokuhamba.
Unokufikelela ngokungenamkhawulo kwi-WiFi, kwaye zonke izinto eziyimfuneko zibonelelwe ngokuhlala kwakho.
Ngena kwaye ujonge ukuba akuqhagamshelwanga ngokupheleleyo, ke akufuneki ube nexhala malunga nokungena ekuhlaleni.
Ukungena kuphuma ngo-15:30pm kwaye uphume ngo-10:30am.
Ukubona lonke uphononongo lwethu lweendwendwe, nceda ucofe kumfanekiso weprofayile yam kwaye iya kukwalathisa.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ungalibazisi ukubuza - singavuya ukuva kuwe.
Ukuhamba nje iiyadi ezingama-200 ukuya kwisitalato iLord kunye nombindi wedolophu yaseSouthport eneendawo zokutyela ezininzi, imivalo kunye neevenkile ezinokujongwa. Ukwakumgama wokuhamba ukusuka kwiPromenade yethu kunye nolwandle oluphumelele ibhaso, iithiyetha zethu kunye neziko lenkomfa.
Undwendwela iSouthport kwiGalufa?
IPortland House ingaphakathi kohambo lwemizuzu eli-10 ukuya kuzo zonke iikhosi zethu zegalufa, kuquka iKlabhu yeGalufa edumileyo, iSouthport neAinsdale Golf Club, iHesketh Golf Club, iHillside Golf Club, iSouthport Old Links Golf Club kunye neSouthport Golf Links.
Silapha ukuze sikuncede kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho ukuba unenkxalabo kwaphela okanye ufuna ingcebiso malunga nommandla wendawo.